ကချင် နယ်စပ်ဂိတ်ပေါက်တွေ လုံခြုံရေးတင်းကြပ်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကို အကြမ်းဖက်သမားတွေ ၀င်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းရရှိထားတာကြောင့် တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာ လုံခြုံရေးသတိရှိကြ ဖို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ ကချင်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံး တာဝန်ရှိသူတွေက ပြော ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ နယ်စပ်ဝင်ပေါက်တွေမှာ လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့ ကချင်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးက ဒုတိယရဲမှူးကြီး ဝင်းခိုင်က ပြောပါတယ်။
"ကချင်ပြည်နယ် အတိုင်းအတာနဲ့တော့ သက်ဆိုင်ရာ နယ်စပ်တွေရော၊ ပြည်နယ်တိုင်းချင်းဆက်တဲ့ နယ်စပ်တွေမှာရော ဝင်ထွက်လမ်းတွေမှာ မိတ်ဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပါ လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိပါတယ်၊ ကျနော် တို့က လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အထက် ဌာနညွှန်ကြားထားတာတွေတော့ ပြည်နယ်တွင်းမှာ ကျနော်တုိ့ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုံခြုံရေးအတိုင်းအတာတွေကတော့ စီမံချက်တွေနဲ့ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါတယ်"
အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်နယ်စပ်တွေမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ အယ်ကိုင်းဒါးနဲ့ RSO (Rohingya Solidarity Organization) အစွန်းရောက် အစ္စလာမ္မစ် ဖောက်ခွဲရေးသမားတွေဟာ အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ တမူးမြို့နယ်နဲ့ မဏိပူရ - မီဇိုရမ်ပြည်နယ် နယ်စပ်လမ်းကနေ ၀င်ရောက်လာနိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိထားတယ်လို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ညွှန်ကြားစာမှာ ပါရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အီရတ်နဲ့ ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွေက အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံထူထောင်ရေး IS အဖွဲ့တွေဟာ မလေးရှားနိုင်ငံက လူငယ်တွေကို အင်တာနက်ကနေတဆင့် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မှာလည်း လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အထူးသတိရှိကြဖို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနက ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့တွေထံ သတိပေးထားပါတယ်။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြစ်ကြီးနားမြို့ ရမ်ပူရပ်ကွက်အတွင်းမှာ အထောက်အထားမရှိဘဲ တည်းခိုနေထိုင်နေတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တချို့ကို ပြည်နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဋ္ဌာနက စိစစ်အရေးယူနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒေါက်တာ ခလမ်ဆမ်ဆွန်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း
ကချင်စစ်ပွဲပြဇာတ် စီစဉ်သူနှစ်ဦး အမှုအတွက် ဆန္ဒပြပွဲ
တရားမဝင် တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကို ဥပဒေအတိုင်း လုပ်ဆောင်မယ်လို့ ပြည်နယ်အစိုးရပြောကြား
တနိုင်းပယင်းမှော်ကို အစိုးရကိုင်တွယ်မှု ကချင်အဖွဲ့ဝေဖန်
လိုင်ဇာက ကချင်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အခက်အခဲ
ကချင်စစ်ပွဲ ပြဇာတ်စီစဉ်သူနှစ်ဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့တရားစွဲ
Al-Qaeda, "IS" တွေက ဗမာပြည်ကို အရေးစိုက်ပြီး လာမျာ မဟူတ်ဘူး။ ဂျောင်ပိတ် အရိုက်ခံထားရတဲ့ ဘင်၈လီ တဖြစ်လဲ အကြမ်းဖက်သမားပဲ လာမှာ။ နားမလည် ပါးမလည်နဲ့ IS ကို သွားပြီး ဆွဲမထဲ့နဲ့။ ဗမာပြည် စုတ်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်
Apr 03, 2015 12:12 PM
နေရပ်- Lucrative business
သတင်းတွေ အဖြစ်ပျက်တွေအရတွေဆိုရင်တော့ မူဆလင်မဟုတ်တဲ့-- မူဆလင်အကျိူးးစီးပွားကို ထိခိုက်ဖျက်စီးစေမဲ့ အလ်ကိုင်းဒါးတွေ အိုင်အက်စ် တွေရဲ့ လက်ဝေခံတွေ မြန်မာပြည်မှာသာမက ကမ္ဘာ့အနှံအပြားမှာ ရှိနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်းကချင်နယ်စပ်မှာ သွားကြိုနေကြပါပြီ။ ဒီလို လန်ကျူတ်အပြောအဆို အပြုအမူတွေဟာ ဖြတ်လမ်းလိုက်ချမ်းသာလိုသူတွေအတွက် အင်မတန်စီးပွားဖြစ်တဲ့ အလုပ်တခုဖြစ်နေပါပြီ။
Apr 01, 2015 10:12 AM
CONSPIRACY ON ISLAM
Al-Qaeda,the IS,in Middle East and Al-shabad, Bokoharam etc,in Africa are TERRORIST ORGANIZATIONS CREATED BY CIA COLLABORATING WITH ITS STOOGES LIKE ISRAEL, SAUDI AND QATAR with the aim of DAMAGING IMAGE OF ISLAM AND fulfilling their evil aims THESE TERRORIST ORGANIZATIONS ARE NOTHING TO DO WITH ISLAM.
Mar 31, 2015 11:23 PM
the CORRUPT DRIVERS IN the so-called NEW SYSTEM HAVE BEEN POISONING IN THE PEACEFUL CO-EXISTENCE.
Mar 31, 2015 10:54 PM